Sida loogaga noqdo emaylka kujira Gmailka Android | Androidsis
Sida loo joojiyo dirista emaylka ee Gmail ee Android
Gmail waa barnaamijka e-maylka heer sare ee adeegsadayaasha Android. Inta badan isticmaaleyaashu waxay leeyihiin koonto iyadaana maalin walba la isticmaalo. Intaas waxaa sii dheer, waxaa si isdaba joog ah loogu cusbooneysiiyaa howlo cusub, sida oggolaanshaha in la joojiyo dirista farriinta, shaqeyn taas ayaa la soo bandhigay xagaagan ee cusbooneysiinta barnaamijka cusub.
Shaki la'aan, tani waa muuqaal ah in dadka isticmaala ay jeclaan karaan wax badan. Tirtir dirista fariinta, maxaa yeelay qalad ayaa ku jiray ama si fudud maxaa yeelay waxaad ka qoomameysay dirista. Gmail wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka noqono rarkaaga, inkasta oo ay xoogaa suurtagal tahay muddo gaaban.
Sidaa darteed, haddii aan rabno inaan joojino shixnaddan, waa inaan si dhakhso leh u dhaqaajinaa marka la isticmaalayo shaqadan ku jira barnaamijka. Laakiin waa in la yiraahdaa isticmaalkeedu waa mid fudud. Marka wax dhibaato ah kuma siin doono arrintan. Sidee u shaqeysaa?
Markaad farriintaada ku sameysid Gmail, waxaan garaacnay badhanka dirista, sida caadiga ah. Markaan dirno, dalabku wuxuu dib noogu celiyaa sanduuqa. Marka, waa inaan isku nidhaahnaa salka shaashadda. Halkaas ayaan ku arki doonnaa taas bar madow ayaa soo muuqaneysa, oo muujineysa batoon ay ku qoran tahay "Ka noqo".
Sidaa darteed, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan gujino badhankaas. Kadib, dirista emaylkan ee Gmail waa la joojinayaa. Maxaa dhici doona markaa waa in farriinta ay mar kale ka muuqan doonto shaashadda, sidii ay ahayd qabyo caadi ah oo caadi ah. Marka waan badali karnaa farriinta ama waxaan qaadan karnaa go'aanka ah in aan gebi ahaanba tirtirno.
Sidaad u aragto, runtii way fududahay in adeeggan lagu isticmaalo Gmail. In kasta oo awoodda ka-noqoshada dirista emaylka ay tahay la heli karo dhowr ilbiriqsi kadib fariintaas kadib. Marka waa inaad ku deg degtaa arrintan, si aad u awoodo inaad uga faa'iideysato.
Casharrada kale ee Gmail
Sida loogu daro akoonno badan Gmail-ka loogu talagalay Android
Sida loo diro emayllo qarsoodi ah oo leh Gmail on Android
Sida dib loogu dhigo ogeysiiska emaylka ee Gmail
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo joojiyo dirista emaylka ee Gmail ee Android
Maxaa ku cusub Snapchat: Filtarada ayaa halkan loogu talagalay bisaddaada
Sida loo xaqiijiyo koontadaada Instagram